Uyenza njani into yokuphucula ukukhula kwengqondo kunyana | Oomama Namhlanje
Uyenza njani into yokuphucula ukukhula kwengqondo kwengqondo ebantwaneni
UAlicia tomero | 10/06/2021 10:00 | ekufundeni, Phuhliso
Uphuhliso lwepsychomotor ebantwaneni ebudaleni yenye yezona ngcebiso zibalaseleyo zokukhuthaza ukukhula kwabo. Abantwana kufuneka baqhubele phambili kwaye bakhule kwimiba yabo yomzimba, yokuqonda, echaphazelekayo kunye neelwimi, kwaye kubaluleke kakhulu ukuba bakhuthaze izakhono zabo ezintle kunye nezibi zezithuthi.
Imoto okanye iimoto ngamagama athetha ukuhamba kwaye sesinye sezakhono ezingundoqo kuphuhliso lwayo. Uphuhliso lwepsychomotor lubandakanya uninzi lweemfuno kunye neemfuno zabo ukuze umntwana akwazi ukuphucula izakhono ezininzi kwaye kunokuphucula ukuzithemba kwakho.
1 Ukubaluleka kophuhliso lwengqondo
2 Ungayiphuhlisa njani izakhono ezigcweleyo zeemoto
3 Ungazikhulisa njani izakhono zokuqhuba kakuhle
Ukubaluleka kophuhliso lwengqondo
Ukudlala bekuhlala kubalulekile kwaye kukhokelela kwindima yabantwana baqhubele phambili ukukhula kwabo. Yindlela yokuyisebenzisa ukuze baphonononge umhlaba wabo kwaye yiyo loo nto bobabini ekhaya, njengasezikolweni nakwiindawo zokugcina abantwana kuthathelwa ingqalelo izakhono zemoto.
Izibonelelo zininzi, kuba ukukhuthaza lo msebenzi sikwanceda abantwana abanengxaki yokusilela, ngoxinzelelo kunye ngeengxaki zokudibanisa nabanye abantwana. Bafunda ukulawula izithuba, ukuqhelanisa, ukwenza izingqisho, ukuphucula imemori yabo kwaye ekugqibeleni baziqhelanise ngcono nehlabathi elingaphandle.
Izakhono zemoto zinokuvuselelwa ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo, ukwenza iintshukumo ezahlukeneyo ekufuneka sizisebenzisile izakhono ezigcweleyo zeemoto ukuqhuba umzimba wonke ngendlela entsonkothileyo. Kwaye kwelinye icala sinalo izakhono ezifanelekileyo zemoto, apho iintshukumo ziya kulungiswa khona apho amehlo, izandla kunye nezihlunu ezincinci zihambelana.
Ungayiphuhlisa njani izakhono ezigcweleyo zeemoto
Uphuhliso lwayo isonjululwa njengokuba umntwana ekhula. Xa umntwana enayo ubudala be-1 ukuya kwi-3 iminyaka Yilapho uqala ukuqinisa imisipha yakho ukudala amanyathelo akho okuqala kunye nokugcina ibhalansi. Baza kufuna uncedo lomntu omdala ixesha elininzi, kodwa kufuneka bakwazi ukuhamba kumgca othe tye kwaye bagcine ukulingana kwabo ubuncinci imizuzwana emithathu.
Njengoko besondela kwi-3 iminyaka Kuya kufuneka bakwazi ukuma ngezithende kunye, bahambe ngezangqa, kwaye batsibe. Uqheliso olunje imidlalo yebhola, ukuxhuma nokudlala nabanye abantwana abakwiminyaka yakhe, uziphucula kakhulu ezi ntshukumo.
Kwiminyaka emi-3 ukuya kwemi-5 ubudala Banokutsiba babuye umva, batshintshe icala ngokubaleka ngokukhawuleza, bakwazi ukukhasa emhlabeni besebenzisa iingalo nemilenze. Ukuzivocavoca emanzini kusebenza kakhulu, imidlalo yangaphandle, ukubaleka, ukukhwela ibhayisikile enamavili amathathu okanye iskateboard ingakumbi imidlalo yebhola.
Ungazikhulisa njani izakhono zokuqhuba kakuhle
Kwiminyaka eyi-1 ukuya kwe-2 yeminyaka, izakhono ezifanelekileyo zemoto zibaluleke kakhulu, Iya kuba sisiseko sezakhono zakho ezincinci kunye nezakhono zemanuwali. Bancede babhale ngokubamba iipeyinti, basebenzise iziqwenga zokwakha xa bedlala, okanye batyhile amaphepha ebali. Xa ufika kwi-2 iminyaka Ngoku unokwenza imigca egqibeleleyo ngekhrayoni yakho, ucofe iimpahla zakho, usebenzise imitya kunye nokudlala nemidlalo enzima ngakumbi yokwakha. Ukongeza, kwimisebenzi yabo yemihla ngemihla, ungaqala ngokuzimela kwinkathalo yakhol njengokukama iinwele zakho, ukuxukuxa, okanye ukutya wedwa.
Ukususela kwiminyaka emi-3 ukuya kwemi-5 ingadlala ngokugqibeleleyo ngamaqhekeza amancinci kwaye ubuchule obaneleyo. Unokwenza imidlalo yemanyuwali enje ngokupeyinta imifanekiso ngayo nayiphi na into, ukumodela ngodongwe, ukudlala ngeziqwenga zokwakha nokwenza imizobo enzima ngakumbi, kubandakanya iileta kunye neenombolo.
Zonke ezi zakhono zichaziweyo zizimvo ezinokuthi zenziwe ngokusetyenziswa kweethoyi okanye imidlalo enokudlalwa ngabazali nabantwana babo. Kubaluleke kakhulu ukudlala okwexeshana nabantwana ekhaya, okanye ngaphandle, ukuze bakwazi phuhlisa zonke izakhono zakho zengqondo. Ke njengengcebiso ungayiqukumbela le misebenzi Iindlela zokuphumla kunye nomculo othuleyo, iya kuba ngumzuzu wonke umntu oya kuwuxabisa.
Ukwazi ukuba loluphi uhlobo lwemisebenzi olunokuphuhlisa izakhono zengqondo yomntwana onokuthi uzenze Sifunde apha. Okanye ukuba unomdla kwizinto abantwana abanokuzenza ngaphandle, funda kuthi eli khonkco.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Phuhliso » Uyenza njani into yokuphucula ukukhula kwengqondo kwengqondo ebantwaneni
Umhlaza wendlala kunye nokuzala, uchaphazela njani?
Unyana wam uyonqena, ndenzeni?